Ndingawanepi Tariro? Mavhesi Anopa Tariro
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Batak (Toba) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish French Galician Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Malagasy Malay Maya Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuMexico Myanmar Nahuatl (Huasteca) Norwegian Oromo Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Tzotzil Ukrainian Valencian Vietnamese Yoruba
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndingawanepi Tariro?
Bhaibheri rinoti Mwari anoda kutipa “ramangwana rakanaka netariro.” * (Jeremiya 29:11) Chimwe chikonzero chakaita kuti Mwari atipe Bhaibheri ndechekuti “tive netariro inobva . . . pakunyaradza kunobva muMagwaro.” (VaRoma 15:4) Sezvatichaona, mazano anobva muBhaibheri anogona kuita kuti tirarame zuva nezuva tiine tariro, uye zvarinotivimbisa zvinoita kuti tive netariro yakanaka yeramangwana.
Bhaibheri rinotibatsira sei kuti tive netariro?
Bhaibheri rinopa vanhu vese tariro ipi?
Mavhesi anopa tariro
Bhaibheri rinogona kutipa tariro nekutiudza mazano anoshanda ezvatinogona kuita kuti tivandudze upenyu. Ona mienzaniso yemazano acho.
Tsvaga mazano anoshanda muBhaibheri. Pisarema 119:105 inoti: “Shoko renyu irambi retsoka dzangu, uye chiedza panzira yangu.” Chiedza chine simba chinogona kuita zvinhu zviviri. Chinogona kutivhenekera zvinhu zviri pamberi pedu, uye chinogona kuvheneka zvinhu zviri kure. Ndizvowo zvakaita mazano ari muBhaibheri, anogona kutibatsira kuti tikunde matambudziko atinenge takatarisana nawo, zvoita kuti tirarame zuva rimwe nerimwe tiine tariro. Zvinodzidziswa neBhaibheri zvinotipazve simba zvoita kuti “mwoyo ufare.” (Pisarema 19:7, 8) Panguva imwe chete, Bhaibheri rinotivhenekera kuti tione chinangwa chaMwari chinofadza nezveramangwana uye nyika ino. Tariro iyoyo inotipa mufaro usingaperi uye inoita kuti tigutsikane.
Kumbira kubatsirwa nevamwe. Patinonzwa tagumirwa, tinogona kunzwa tisingadi zvekutaura nehama kana shamwari. Bhaibheri rinotiudza kuti hatifaniri kudaro nekuti tinogona kupedzisira taita zvinhu zvisina musoro. (Zvirevo 18:1) Hama neshamwari dzinogona kutibatsira kuti tive nemafungiro akanaka. Vanogonawo kutipa mazano ekuti toita sei mumamiriro ezvinhu akaoma. (Zvirevo 11:14) Kupfuura zvese, vanogona kutinyaradza nekutizorodza zvotipa simba rekutsungirira kusvika zvinhu zvava nani.—Zvirevo 12:25.
Nyengetera kuna Mwari. Bhaibheri rinoti: “Kanda mutoro wako pana Jehovha, iye achakutsigira. Haazombobvumiri munhu akarurama kuti adonhe.” * (Pisarema 55:22) Ndochikonzero nei Jehovha achinzi ‘ndiMwari anopa tariro.’ (VaRoma 15:13) Unogona kunyengetera uchimuudza “zvese zvinokunetsa,” uine chivimbo chekuti ane hanya newe. (1 Petro 5:7, mashoko emuzasi) Bhaibheri rinototi: “Achakutsigisai, achakusimbisai, uye achaita kuti mumire makasimba.”—1 Petro 5:10.
Ita kuti miedzo isimbise tariro yako. Bhaibheri rinovimbisa kuti: “Munhu [anoteerera Mwari] achagara akachengeteka uye haazonetseki achitya dambudziko.” (Zvirevo 1:33) Mumwe mukadzi anonzi Margaret wekuAustralia akaparadzirwa imba yake nemafashamo uye akarasikirwa nezvinhu zvakawanda. Asi pane kuti abve apererwa, akadzidza chidzidzo chinokosha. Akadzidza kuti zvinhu zvinogona kungoparara nyore nyore. Akatsidza kuti aizoisa pfungwa pazvinhu zvinokosha, mhuri yake uye shamwari dzake, ushamwari hwake naMwari, uye tariro yake inobva muBhaibheri.—Pisarema 37:34; Jakobho 4:8.
Bhaibheri rinovimbisa ramangwana rakajeka. Nguva iyoyo yava kutosvika. Tingatoti, matambudziko ari kushungurudza vanhu parizvino anoratidza kuti tiri kurarama “mumazuva ekupedzisira” enyika ino. (2 Timoti 3:1-5) Munguva pfupi iri kutevera, Mwari ndiye achange ava kutonga panyika uye achabvisa zvinhu zvakaipa nekutambura. Achazviita achishandisa hurumende yake inonzi Umambo hwaMwari. (Dhanieri 2:44; Zvakazarurwa 11:15) Ndiyo hurumende yakataurwa naJesu paaiti: “Umambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe, panyika.”—Mateu 6:9, 10.
Zvinodiwa naMwari zvinonyatsotaurwa zvakajeka muBhaibheri. Ona mamwe matambudziko achabviswa neUmambo hwaMwari:
Kuchange kusisina nzara. “Nyika ichabereka zvibereko zvayo.”—Pisarema 67:6.
Kuchange kusisina zvirwere. “Hakuna mugari wemo achati: ‘Ndiri kurwara.’”—Isaya 33:24.
Kuchange kusisina kufa. Mwari “achapukuta misodzi yese pamaziso avo, uye hapazovi nerufu, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa. Zvinhu zvekutanga zvapfuura.”—Zvakazarurwa 21:3, 4.
^ ndima 1 Tinova netariro nechimwe chinhu kana tichichishuva uye tichitenda kuti tinogona kuchiwana. Tariro inogonawo kuva yechinhu chatinotarisira kuva nacho.
^ ndima 5 Jehovha ndiro zita raMwari rinotaurwa muBhaibheri.—Pisarema 83:18.
Jobho 5:16: “Vakaderera [vane] tariro.”
Zvazvinoreva: Vaya vanonzwa sevanotarisirwa pasi vanogona kuvimba naMwari kuti achavabatsira pavanomukumbira kubatsirwa.
Pisarema 27:14: “Tarisira kuna Jehovha; shinga uye mwoyo wako ngausimbe. Tarisira kuna Jehovha.”
Zvazvinoreva: Patinovimba naJehovha Mwari, tinowana simba uye ushingi. Haazosiyi vaya vanovimba naye.
Pisarema 62:5: “Ndinomirira Mwari ndakanyarara nekuti tariro yangu inobva kwaari.”
Zvazvinoreva: Vaya vanotsungirira matambudziko vachivimba naMwari vanogona kuva nechivimbo chekuti achavazorodza panguva yakakodzera.
Zvirevo 20:22: “Usati: ‘Ndichatsiva chakaipa!’ Isa tariro muna Jehovha, uye achakuponesa.”
Zvazvinoreva: Kana mumwe munhu akatirwadzisa kana kutitsamwisa, tinogona kukunda chido chekutsiva kana tariro yedu iri muna Jehovha. Ane simba uye chido chekutiponesa uye kubvisa zvese zviri kutitambudza.
VaHebheru 6:19: “Tine tariro iyi [yechiKristu] sechinhu chinotsigisa mweya, yechokwadi uye yakasimba.”
Zvazvinoreva: Sezvinongoita chinhu chinotsigisa ngarava kana kuine dutu, tariro yekuwana mubayiro kubva kuna Mwari inogona kuita kuti tisanyanya kunetseka uye inogona kutibatsira kuramba takadzikama, kufunga zvakanaka, uye kuramba tiine kutenda kwakasimba. Tariro inogonawo kutipa simba rekutsungirira matambudziko.
Zvese zvinoitika muupenyu hwemunhu zvakatorongwa naMwari here?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndingawanepi Tariro?
ijwbq nyaya 180